September 2017 – Arakan Times
September 30, 2017	Leaveacomment 693 Views
6 more Rohingya bodies recovered in Inani beach
September 30, 2017	Leaveacomment 869 Views
30 September 2017 AT Correspondent, Cox’s Bazar Six more Rohingya corpses were recovered at Inani sea beach of Ukhiya, Cox’s Bazar which carried by tide water on Friday, 29 Sep. According to our correspondent report, the six persons died afteraRohingya carrying boat had been capsized in the sea while the boat was coming from Myanmar side. On Friday, ...
Mass ‘graves’ of Rohingya bodies found in Buthidaung south
September 29, 2017	Leaveacomment 1,770 Views
29 September 2017 AT Correspondent, Buthidaung Mass ‘graves’ of Rohingya dead bodies killed by Myanmar brutal armed forces and Rakhine extremists were found at Gudamfara of Buthidaung south on 27 September 2017. The Rohingya dead bodies found at 12 graves were killed and buried by Myanmar forces and Rakhine extremists after 25 August, according to our correspondent report. More than ...
September 29, 2017	Leaveacomment 524 Views
ဘူးသီးတောင်မြို့၊တောင်ပိုင်းအထက်ကျွဲကြိုမော်အုပ်စု၊ကာဒီရွာတာဝန်ခံဦးလင်းလင်းသည်စက်တင်ဘာလ၂၅ရက်နေ့တွင်ရွာရှိရပ်မိရပ်ဖများကိုခေါ်ယူ၍ကျပ်ငွေ၉သိန်းတောင်းခံခဲ့ပါသည်။တောင်းခံငွေမပေးပါကရွာမှတစ်ကောင်မကျန်ထွက်သွားရန်ခြိမ်းမောင်းပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ရွာသားများသည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများဖြစ်၍ဆက်ကြေးများပေးရန်မတတ်နိုင်ပါသဖြင့်၂၆၊၉၊၁၇ခုနေ့နံနက်၇း၀၀နာရီတွင်နေရပ်စွန့်ခွာထွက်သွားရပါသည်။ ဂူဒါမ်ပါရာ ကျေးရွာတွင် စစ်တပ်ကလူသေအလောင်းမြုပ်နှံထားသောကျင်းများတွေ့ရှိပါသည်။ ဂူဒါမ်ပါရာကိုမီးရှို့ပြီးကျန်ရှိနေသောအိမ်များမှကျောက်စာတိုင်ရွာမှအစွန်းရောက်ရခိုင်များနှင့်လက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမောင်ကာစိန်တို့သည်ပစ္စည်းများ၊ကျွဲ၊နွား၊ဆိတ်များလုယက်၍ယူသွားခဲ့ပါသည်။ဖိရ်ဆာပ်၏နေအိမ်မှဗီရိုတစ်လုံးနှင့်အခြားအဖိုးတန်ပစ္စည်များကိုလည်းယူသွားခဲ့ပါသည်။ တပ်မင်းချောင်းအုပ်စုသို့ ၂၇ ရက်နေ့တွင်တပ်ရင်းအမှတ်(၃၅၂)၏တပ်ရင်းမှဗိုလ်မှူးတစ်ဦးသွားပြီးရွာသားများကိုအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးရွာမှမထွက်ခွာဘဲ ညီညွတ်စွာနေထိုင်ရန်မှာကြားပြီးရွာသားများထံမှဆန်အိတ် ၅၀အိတ်ကိုကောက်ယူကာမရှိဆင်းရဲသားများအားပေးဝေရန်ဟုပုံထားပါသည်။ ဘုရားပြင်အောင်ပ၊ညောင်ချောင်းရိုဟင်ဂျာရွာများသို့နယ်ခြားစောင့်လာရောက်ပြီးရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးများအားအဓမ္မပြုကျင့်ရန်ကြိုးစားခြင်း၊ပွဲစားဖြစ်သူဦးအီဆုပ်နှင့်အမျိုးသမီးများကိုခေါ်ခိုင်းကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ထို့ကြောင့်သမီးပျိုများ၊မုဆိုးမများသည်ညကျလျှင်မအိပ်နိုင်တော့ဘဲအ်ိပ်ရေးပျက်တိမ်းရှောင်နေရပါသည်။ ကျောင်းတောင်အုပ်စုဂန်းဓာရူး မြိုရွာ၏တာဝန်ခံ ဦးစင်ဂနာခေါ်(ရဲအောင်)သည်၂၆၊၉၊၂၀၁၇ခုနေ့(စာကိုင်း)ရိုဟင်ဂျာရွာသို့ည၁၀း၀၀နာရီအချိန်တွင်ဓားတစ်လက်ကိုင်လျက်လာရောက်ပြီးဗလီအိမ်ခေါင်မိုးရှိsolarပြား100wတစ်ခုကိုလုယက်၍ယူသွားသည်ကိုကျောင်းတောင်နယ်ခြားစောင့်ရဲမှူးထံတိုင်တမ်းသော်လည်းမည်သို့မျှအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြောင်း #ArakanTimes Burmese သို့ရွာသားများကပြောပါသည်။
September 29, 2017	Leaveacomment 310 Views
၂၇၊၉၊၂၀၁၇ခုနေ့ကျားခေါင်းတောင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှနယ်ခြားစောင့်များကသေနတ်များတရစပ်ပစ်ပေါက်သောကြောင့်ရွားသားတို့သည်နေအိမ်မှမထွက်နိုင်ဘဲအစာရေဆာပြတ်လပ်နေသည်။ မောင်တောမြို့ ၊အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်မှရိုဟင်ဂျာအိမ်တစ်လုံးကို၂၇ရက်နေ့ညနေ၆း၃၀အချိန်တွင်ရခိုင်အစွန်းရောက်ကမီးရှို့ခဲ့သည်။ ဘူးသီးတောင်မြို့မှနေရပ်စွန့်ခွာထွက်ခွာပြီးကျီးကန်ပြင်သို့ရောက်ရှိသူများအားနယ်ခြားစောင့်များကရပ်တန့်စေသဖြင့်ငတ်မွဲမှုဒဏ်ကိုအလူးအလဲခံစားနေရပါသည်။ ၂၇ရက်နေ့နေ့လယ်၂း၃၀အချိန်တွင်တောင်ပြိုမြို့နယ်ခွဲပိုင်ဇီးပင်ချောင်းအုပ်စုချောင်းကူလားရွာရှိရိုဟင်နေအိမ်များကိုဇီပင်ချောင်းစခန်းမှBGPများကမီးရှို့ခဲ့ကြသည်။ ရေတွင်းပြင်ကျေးရွာတာဝန်ခံဦးကျော်ဟိန်းနှင့်အပေါင်းအပါ၆ဦးတို့သည် BGPများနှင့်ပူးပေါင်း၍နီးစပ်ရာရွာများမှကျွဲ၊နွား၊ဆိတ်များအပြင် ဆန်နှင့် plastics ထိုင်ခုံများပါလုယက်၍ Bangladeshသို့ပို့ဆောင်လျက်ရှိနေပါသည်။ ကျေက်ချောင်းရွာမှBangladeshသို့ထွက်ခွာလာသူများကိုစစ်တပ်နှင့်နယ်ခြားစောင့်တို့ကတရစပ်သေနတ်ပစ်ခဲ့ကြောင်းရွာသားများကArakan Times Burmeseသို့ပြောပါသည်။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှ ကျေးရွာအများအပြားက ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ ရပ်ရွာတွေမှာ နေထိုင်ဖို့ မလုံခြုံမှု
September 27, 2017	Leaveacomment 450 Views
#ArakanTimes Burmese 27 Sep 2017 စားနပ်ရိက္ခာ ရှားပါးလာမှု စတာတွေကြောင့် စက်တင်ဘာလ ၂၆ရက်နေ့က ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံရန် ထွက်လာခဲ့ပြီး ယနေ့ မနက်ပိုင်းက မောင်တောမြို့ မြောက်ပိုင်း ကျီးကန်ပြင်သို့ရောက်ရှိရာ ရဲအချို့ ဆိုင်ကယ်ဖြင့်ရောက်ရှိလာကာ တားဆီးသဖြင့် အချို့မှာ နောက်ပြန်လှည့်ထွက်ပြေးလာနိုင်ခဲ့ပြီး ကျန်ရှိသူများမှာ ရဲက နောက်ပြန်လှည့် သွားခွင့်မပေးဘဲ ထိုနေရာ၌ပင် တားဆီးထားသဖြင့် လူထောင်နဲ့ချီကာ လယ်ပြင်တွင် ပိတ်ဆို့ခံထားရပါတယ်။ အလားတူ ဘူးသီးတောင်မှ ထွက်ပြေးလာသူ ရိုဟင်ဂျာအချို့သည်လည်း ယနေ့ မနက်ပိုင်းက မောင်တောမြို့ အလယ်သံကျော်ရှိ နာကော်ဒီယာ ခေါ် သောင်ပြင်တွင်ရောက်ရှိနေစဉ် နယ်ခြားစောင့်နှင့် စစ်သားများရောက်ရှိလားပြီး သွားခွင့်မပေးဘဲ ထိုနေရာ၌ပင် ပ်ိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ ကလေးသူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများနှင့် ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ပိတ်ဆို့ထားပြီး နောက်ပြန်လှည့်သွားရန်လည်း ခွင့်မပြုသောကြောင့် လယ်ပြင်၊ သောင်ပြင်တွင် ပိတ်ဆို့ခံထားရသော ရိုဟင်ဂျာများသည် ...
Breaking News: Fleeing Rohingyas under attack of Rakihne extremists and armed forces in Maungdaw
September 27, 2017	Leaveacomment 1,020 Views
27 September 2017 AT Correspondent, Maungdaw Thousands of Rohingyas crossed over Mayu mountain range from Buthidaung to Maungdaw are being encircled and looted their valuables and cash money by Rakhine extremists today, 27 September 2017. Myanmar military and Border Guard Police have still been conducting arson attack forcing Rohingya people flee to Bangladesh. At least one thousand Rohingyas from Buthidaung ...
Breaking News:5Rohingyas stabbed death, 1 injured in Naf-river
September 26, 2017	Leaveacomment 1,221 Views
26 September 2017 AT Correspondent, Maungdaw At least five members of Rohingya community were stabbed to death and one injured by Myanmar navy forces while the victims were trying to flee the violence to Bangladesh on 25 September. Source said to our correspondent, the Myanmar navy forces chased down the victims while they were crossing the Naf-river by paddle boat ...
September 25, 2017	Leaveacomment 724 Views
၂၄၊၉၊၂၀၁၇ခုနှင့်၂၅၊၉၊၂၀၁၇ခုရက်နေ့များ၌Myanmar Information CommitteeမှARSA ကိုစွပ်စွဲ၍ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းသည်လုံးလုံးလျားလျားမှန်ကန်မှုမရှိပေ၊ဝါဒဖြန့်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းရေးသားလိုပါသည်။ မြန်မာအစိုးရသည်Genocideတရားခံအဖြစ်ငြိစွန်းနေပါသဖြင့်ကမ္ဘာကြီးကိုလိမ်ညာရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း၊ARSA သည်Hinduလူမျိုးများကိုလုံးဝသတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းARSA Commaderတစ်ဦးဖြစ်သူAbu SalmanကArakan Times သို့အတည်ပြုပြောဆိုပါသည်။ Hindu လူမျိုးနှင့်ရိုဟင်ဂျာတို့အချင်းချင်းမည်သို့မျှပြဿနာမရှိကြောင်း၊အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်လာကြသည်မှာကာလကြာညောင်းပါသည်။ Hindu လူမျိုးနှင့်ရိုဟင်ဂျာဘာသာစကားချင်းလည်းကောင်း၊ရုပ်အဆင်းသဏ္ဌာန်ချင်းလည်းကောင်းတူသည်များကိုမြန်မာစစ်တပ်ကသတိမမူဘဲရိုဟင်ဂျာဟုထင်မှတ်ကာပစ်သတ်ခဲ့သည်များကိုယခုအခါမြန်မာအစိုးရကARSA ကိုပစ်မှတ်ထားပြီးARSAက Hindu များကိုသတ်ဖြတ်သည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲ၍ဝါဒဖြန့်လျက်ကမ္ဘာကိုလိမ်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်မှာမလွဲဧကန်ပါဘဲ။ သတ်ဖြတ်ခံHinduလူမျိုးများ၏မိသားစုဝင်များသည်Bangladeshသို့ထွက်ပြေတိမ်းရှောင်ခိုလှုံနေပြီးဖြစ်ကြောင်း၊၎င်းတို့ကိုယ်တိုငိထွက်ဆိုသောvideoမှတ်တမ်းမှာ”မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ကမိမိတို့မိသားစုဝင်များကိုသတ်ဖြတ်ကြသည်”ဟုထွက်ဆိုခဲ့သောအထောက်အထားများစွာရှိပါသည်။ ARSA Commaderဖြစ်သူက”မြန်မာအစိုးရကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီးမည်သည်community;civilianကိုမှတိုက်ခိုက်ရန်ကြံရွယ်ထားခြင်းမရှိကြောင်း”Arakan Timesသို့ပြောဆိုအပ်ပါသည်။
September 24, 2017	Leaveacomment 3,915 Views
24 September 2017 By Arakan Times Myanmar government information committee said 28 dead bodies of Hindus, eight men and 20 women buried in two pits had been found in Maungdaw in Northern Rakhine State on Sunday. The statement added that the deceased are out of 100 people arrested by Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) from Yebaw Kya village on August ...